अमेरिकाको होपी जनजाति - Naya Online
शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ (April 9th, 2021 at 11:18am ) ब्रेकिंग न्युज, विश्व
१ फरवरी २०२० सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय मान्यता प्राप्त आदिवासीको सूची हेर्दा ५७४ मूल निवासी (नेटिभ अमेरिकन)हरूको नाम भेटिन्छ । संघीय सूचीमा प्रविष्ट पाएको होपी जनजातिहरू यहाँका सबैभन्दा प्राचीन जातिका मानिसहरू हुन् । उनीहरू उत्तर पूर्वी एरिजोनामा होपी आरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् ।
आरक्षणभित्रका तीनवटा चट्टानी मेसाहरूमा पहिलो मेसाको माथिल्लो भागमा रहेका वाल्पी, टेवा र सिचोमोवी तीन गाउँहरूमा सबैभन्दा दर्शनीय वाल्पी गाउँ मानिन्छ । यहाँका पुरानो ढुङ्गाको घरहरू चट्टानहरूमा टाँसिए जस्तो देखिन्छ । यो शताब्दीयौंदेखि अपरिवर्तनीय छ ।
(होपी आरक्षण क्षेत्र)
दोस्रो मेसाको तीनवटा गाउँहरू सुंगोपावी, सिपौलोवी र मिसंग्नोवी हुन । धेरै जसो धार्मिक र औपचारिक क्रियाकलाप सुंगोपावीबाट सुरू हुन्छ । सिपौलोवी “पुएब्लो विद्रोह” पछि स्थापना भएको अन्तिम गाउँ हो । तेस्रो मेसाको पछाडि पश्चिममा अवस्थित क्यकोट्समोवी, ओल्डओरावी, बाकावी र होटेभिला गाउँहरूलाई उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा परानो बस्ती भनेर चिनिन्छ ।
ग्रान्ड क्यान्यनको पूर्वपट्टि चार कुनाको नजिक नाभाजो आरक्षणले घेरिएको कोकोनिको र नाभाजो काउन्टीको तीन मेसामा १२ वटा पुएब्लोस (गाउँ)–हरू मिलेर बनेको होपी जनजातिहरूको आफ्नो सरकार छ । यसलाई होपी आदिवासी परिषद भनिन्छ । होपी आदिवासी परिषदका अध्यक्ष तिमोथी एल. नुवानग्याओमा, उपाध्यक्ष क्लार्क डब्ल्यू. तेनाखोंगवा, आदिवासी सचिव थेरेसा लोमाकेमा र कोषाध्क्ष विल्फ्रेड एल. गैसिओमा छन् ।
१६ दिसम्बर १८८२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति Chester A. Arthur ले एक कार्यकारी आदेश जारि गरेर होपी जनजातिलाई आरक्षण दिएका थिए । यहीबाट होपी जनजातिहरूको आरक्षण सुरू भएको हो । सन् १९३६ को दिसम्बर १९ मा होपी संविधान र उप–कानूनको प्रयोगको साथ स्थापित संविधान बमोजिम होपी आदिवासी परिषदसँग होपीहरूको हितको लागि सबै विषयमा प्रतिनिधित्व गर्ने र बोल्ने अधिकार छ । संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारहरू र परिषद वा सरकारको साथ वार्ता गर्ने अधिकार होपी जनजातिहरूलाई प्राप्त छ । होपी जनजाति सरकार एक सदनात्मक सरकार हो, जहाँ सबै अधिकारहरू आदिवासी परिषदमा निहित छ ।
सन् २०१०को जनगणना अनुसार होपीहरूको जनसंख्या १९,३३८८ छ । लगभग ६.५५७.२६ किलो मिटर (२.५३१.७७३ वर्ग माइल) क्षेत्र उनीहरूको आरक्षणभूमिमा पर्दछ । होपीहरू युटो–अजेटेकन भाषिका परिवारको शोशोन भाषा बोल्दछन ।
होपी मूल शब्द होपिटु–शि–नु–मुको एक छोटो रूप हो, जसको लागि सबैभन्दा सामान्य अर्थ “शान्त मानिस” हो । होपी संस्कृतिको धर्म, अध्यात्मिकता र यसको नैतिक्ताको दृष्टिकोणमा गहिरो जरा गाडेको अवधारणा हो । होपी हुनु भनेको शान्तिमा रहन र “मासा” को शिक्षा अनुरूप जीवन विताउन यस अवधारणाको लागि प्रयास गर्नु हो । हजारौ वर्षदेखि एकै ठाउँमा निरन्तर बाँचिरहेका होपीहरू गहिरो धार्मिक व्यक्तिहरू पनि हुन, जसका रीतिथितिहरू र अनुष्ठान समारोहको लामो वर्षे क्यालेन्डरले उनीहरूको जीवनको प्रत्येक पक्षलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।
आधुनिक होपी किसानहरू अझै पनि पुरानो विधिहरू प्रयोग गरेर मकै, खरबुजा, लौका, सिमी खुर्सानी आदि उत्पादन गर्छन । मकै मुख्य बाली हो ।
होपी जनजाति खेती गर्न निकै सिपालु छन । उनीहरू गाह्रौ माटोमा बलियो बाली लगाउँछन । होपीहरूको आयस्रोत भनेको सानो स्तरको खेती र पशुपालन, विभिन्न साना व्यवसाय, खनिज विकास रोयल्टी भुक्तानी, समुदाय सुधारको लागि सरकारी अनुदान बाहेक काचिना पुतली, चाँदीको गहना, बुनेको टोकरी र भाँडाहरू बनाउने इत्यादि काम गर्दछन ।
होपी बच्चाहरूलाई अङ्ग्रेजी सभ्यताको तरिका सिकाउन सन् १८८७ मा खोलिएको स्कुल नै पहिलो स्कुल हो । यो केम्स क्यान्यन (Keams Canyon)–मा खोलिएको थियो । धेरै होपी परिवारहरूले आफनो परम्परागत संस्कृति कायम राख्न आफ्नो बाल बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन अस्वीकार गरे । आज होपी बच्चाहरूले शिक्षा उपलब्ध औचारिक स्कुल प्रणालीहरू मार्फत र किवास जस्ता ठाउँहरूमा परम्परागत शैक्षिक गतिविधिहरूको माध्यमबाट प्राप्त गर्छन् ।
प्रमाणले संकेत गर्दछ कि होपीमा विभिन्न समूहका वंशजहरू थिए जुन उत्तर पूर्व र दक्षिणबाट देशभित्र पसे । लामो समय सम्म उनीहरूको पुर्खाहरू, अनासाजी, मेक्सिकोको एजेटेकसँग सम्बन्धित देखिन्छन र उनीहरूको हालको स्थानदेखि १० हजार वर्ष पहिले आइपुगेका हुन सक्छ ।
होपीको घर ढुङ्गा र माटोले बनेको हुन्छ । अग्लो पनि हुन्छ । किवा (मन्दिर) पुएब्लो घरमा रहेको कोठामा उनीहरूको धार्मिक समारोह गर्ने ठाउँ मानिन्छ । किवा प्रायःदोस्रो तलोमा राखिन्छ । भुइँ तलोको केन्द्रमा आगो बाल्ने अगेनो बनाइन्छ । तलो चढ्नलाई भरयाङको प्रयोग गरिन्छ ।
होपी बच्चाहरू बाबुको कुलका नभइ आमाको कुलका सदस्य हुन्छन । बच्चा जन्मेपछि उनीहरूलाई आफैले बुनेको एउटा विशेष कम्बल र मुख्य अन्न मकै उपहार दिने गरिन्छ । मकै होपी निर्वाह र धर्मको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । २०औ दिनमा बच्चालाई मेसा चट्टानमा लगेर उदाउँदो सूर्यमा अनुहार देखाइ सूर्यबाट आशिष पाउने यो परम्परा अझसम्म कायम छ ।
होपीहरू सृष्टिकर्ता ईश्ररलाई ताइओवा (Taiowa) भनी पुकार्छन् । ताइओवाले (Sotuknang) लाई सृजना गरेर ब्रह्माण्ड बनाउन आदेश दिए । Sotuknang ले बनाएको पहिलो विश्वलाई टोकपेला (Tokpella) भनिन्थ्यो र त्यहाँ जमिन, पानी र हावा साथसाथै Koyangwuti (माकुरोको माउ)–ले Poqanghoya र Palongawhoya जुम्ल्याहा सन्ताहरू जन्माएकी थिइन् । Sotuknangको निर्देशनमा माकुरोको माउले सबै जीवहरू बनाइन । तर प्रायः पुरूषहरूले देवताहरूको आग्या पालन गरेनन् । त्यसैले Sotuknang ले उनीहरूलाई बाढीले मारे । दुई थप नराम्रो संसारहरू सृजना गरेर नष्ट गरे । चौथो विश्व आधुनिक संसार तुवाकाची (Tuwaqachi) हो ।
मूलनिवासी अमेरिकीहरू मान्दछन कि मरेका मानिसहरू ब्रहमाण्डको अर्को ठाउँमा जान्छन जहाँ तिनीहरूको नयाँ अस्तित्व छ । अनि दैनिक जीवनका गतिविधिहरू जस्तै तिनीहरू अझै जीवित छन । तिनीहरुको केवल संसारमा मात्र फरक छ । ब्रहमाण्डमा एक सर्वशक्तिमान, एक आत्मिक शक्ति छ जुन सबै जीवनको स्रोत हो भनि विश्वास गर्छन । सूर्यलाई सर्वशक्तिमानको शक्तिको रूपमा हेरिन्छ तर उनीहरू सूर्यलाई पूजा गर्दैनन् ।
होपीहरू विश्वास गर्दछन कि मानवको कार्यले गर्दा पृथ्वीलाई सन्तुलनबाट बाहिरको बनाएको छ र यसले ग्रहको विनाशकारी महान शुद्धिकरण गर्न सक्छ जुन थोरै मात्र बाँच्नेछन । अन्तको समयको बारेमा होपी विश्वास गर्छन कि आकाशमा जुन समय निलो तारा देखा पर्नेछ पृथ्वीले ठूलो भूकम्प, सुनामी र सुपर ज्वालामुखीको सामना गर्नु पर्नेछ ।
शताब्दीदेखि होपी जनजातिहरू एक कुलको रूपमा जीवित छन र आजसम्म उनीहरू आफ्नो संस्कृति, भाषा र धर्मलाई बाहिरी विश्वको प्रभावहरूको बावजुद कायम राख्न सफल छन ।
-उदय पुर्वेली चोङ्वाङ्क्याक विभिन्न लेखक, मुन्धुमविद तथा इतिहासकारहरूको मतअनुसार, वर्तमान अवस्थाको लिम्बूवान र लिम्बू...
काठमाडौ, ७ भदौ । २०७७ सालको मदन पुरस्कार पुर्व सिडिओ भगिराज इङ्नामको ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक...
मोतीजयन्तिको अवसरमा गजल चर्चासहित नयाँ साहित्य
काठमाडौ, २६ भदौ । नयाँअनलाईनको शनिबारीय परिशिस्टाङ्क नयाँसाहित्य मोतिजयन्तिको अवसर पारेर गजलविशेष ल्याइएको छ...
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न बालकोटमा
काठमाडौ, २४ भदौ । बिहिबार बिहान काठमाडौ आइपुगेकी अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन...
राजनीतिलाई ‘गरीखाने भाँडो’ बनाउनेहरूले देशलाई ‘गति न मति’ बनाए
मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू नेपालको राजनीति गर्ने धुरन्धर क्रियाशिल अथवा होल्डटाइमरहरू अन्तमा आएर पेशाको रुपमा...
विश्लेषणात्मक लेखसहित यसपल्टको नयाँसाहित्य
धरान, १९ भदौ । वृहत् नागरिकको आन्दोलनबारे विश्लेषणात्मक लेखसहित यसपल्टको नयाँसाहित्य आएको छ ।...
बच्चु हिमांशु अघिल्लो वर्षदेखि लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सामाजिक न्यायको पक्षमा बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा...
आप्पुङ्गीहाङ याक्थुङ १. शुरूवात याक्थुङ समुदाय पृथक साँस्कृतिक पहिचान भएको आदिवासी हुन् । विशेषगरि...
मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको जनताको अधिकार र केही वाँकी रहेका अधिकारहरू...